I-china Cavitation rf vacuum yesisindo somshini wokukhiqiza nokwakha | | I-GGLT
Umshini wokulahlekelwa isisindo we-cavitation rf
Umshini wethu wokulahlekelwa isisindo we-Cavitation rf we-professional ne-Infrared RF Vacuum Roller technology uhlanganisa ukukhanya kwe-infrared, amandla we-bi-polar radio frequency energy kanye ne-vacuum, okubangela ukushisa okujulile kwamaseli amafutha, izicubu zawo ezizungezile kanye nemicu eyisisekelo ye-dermal collagen. Lolu hlobo lokushisa nokuhlanza olusebenzayo lushukumisa ukukhula kwe-collagen entsha neyingcono ne-elastin okuholela ekwehliseni okwenziwe endaweni okwenziwa ukuxega kwesikhumba, ivolumu yomzimba, kanye nokwenza ngcono ngokuphelele kwesakhiwo sesikhumba nokuthungwa.
IVelashape yindlela entsha engeyona eyokuhlasela esebenzisa inhlanganisela yobuchwepheshe ukunquma umzimba wakho nokunciphisa ukubukeka kwe-cellulite. Umshini wobuchwepheshe ulawula isikhumba sakho ngenkathi ukukhanya kwe-infrared kanye namandla we-bi-polar radio frequency amandla eshisa ngobumnene amaseli amafutha kanye nezicubu ezizungezile.
Isetshenziselwa ukwelashwa: Ukususwa kwe-Cellulite, Ukuncipha komzimba, ukuqina kwesikhumba, ukuphakamisa ubuso, ukususwa kombimbi, ukuncipha komjikelezo womzimba, isikhumba esibushelelezi, ukubhucungwa komzimba nokwelashwa kwendawo yejwabu leso.
4 isingatha umshini we-Velashape --- Umshini + we-Infrared Laser + Bipolar RF + Rollers
I-laser ye-infrared inciphisa ukuvimba kwesikhumba ngokushisa isikhumba namandla we-RF angena ngokujulile kuzicubu ezixhuma ukwandisa ukusakazeka kwe-oxygen intracellular ngokushisa isikhumba.
I-2.Vacuum kanye nama-rollers aklanywe ngokukhethekile asebenzisa ukungena kwe-RF ukuthi kube yi-5-15mm. Nip futhi welule izicubu ezixhuma ze-fibrillar zithuthukisa kakhulu umphumela wokuphambana komzimba.
3.The technology that vacuum folds skin kwenza RF amandla ukungena esikhunjeni ethize eligoqiwe, kakhulu ngcono umphumela nokuphepha, ngisho eliphezulu engenhla ukwelashwa endaweni ijwabu leso.
BONISA Isikrini esiboniswa: 10.4 "TFTchromaticescreen
Khombisa isikrini ku-handpiece 3.2 "no-3.5"
AMANDLA OKUVAMISA IMISAKAZO YOMSakazo 100watt
UKUCINDEZELEKA OKUNGCONO Inani eliphelele le-90kPa-25kPa (68.4cmHg-19cmHg)
Ukubuyiselwa Kweqile: 10kPa-75kPa (7.6cmHg-57cmHg)
ISIFUNDA SE-ROLLER 0-36rpm
INDLELA YOKUSEBENZELA I-ROLLER Izinhlobo ezi-4 (Ku-Out, Kwesobunxele, Kwesokudla)
SAT ETY UKUHLOLA Isikhathi sangempela kulayini
Ukuqina KWE-RF ENERGY Ubukhulu: 50J / cm3
UKUTHUTHUKISWA KWE-LASER 940nm
AMANDLA OKWENZEKILE 5-20w
INDAWO YOKWELAPHA 4mmx7mm, 6mmx13mm, 8mmx25mm 、
AMANDLA OKULINGANISELWA Alinganiselwe 850VA
INDLELA YOKUPHA amandla AC230 / 110V +/- 10% 50Hz +/- 1Hz
ISISINDO SENGQIKITHI 79kg
Ubukhulu bomzimba 59CM * 60CM * 135CM
Q1: Ngingayilindela miphi imiphumela?
I-A1: Ezivivinyweni zomtholampilo, amandla womzimba we-VelaShape aholele ekwehliseni usayizi owodwa wengubo ngemuva kokwelashwa.
I-Q2: Ngizolubona masinyane kangakanani ushintsho ngemuva kokwelashwa?
I-A2: Uzoqala ukuqaphela ukuthuthuka kancane kancane kwendawo elashwa ngokushesha lapho isikhumba sakho siqala ukuzizwa sishelelisa futhi siqine. Ngokuhamba kwesikhathi uzobona umjikelezo omncane kuyo yonke indawo ephethwe kanye nokwehla kokubukeka kwe-cellulite, futhi imiphumela emihle izobonwa cishe emavikini ayishumi.
Q3: Ngabe kudingeka ngikwenze ukwelashwa okungaki?
I-A3: Ngokuvamile kuthatha ukwelashwa okungu-3-4 ukufeza imiphumela emihle kakhulu. Imvamisa kungenzeka ukufaka esikhundleni seseshini eyodwa yokwelashwa isikhathi eside kuze kube izikhathi ezintathu ezimfushane.
Langaphambilini Professional Nd yag laser tattoo ukususwa umshini we-laser wokususa izinwele ongu-808
Olandelayo: Okomshini we-Salon Vacuum Roller Massage
Umshini wokuqopha umzimba we-HIFEM
Isakhiwo se-HIEMT esime mpo